Chris Moya, SpainRevolt Ary Ny Hafanàm-po Ety Anaty Habaky Ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Chris Moya, SpainRevolt Ary Ny Hafanàm-po Ety Anaty Habaky Ny Aterineto
Voadika ny 15 Novambra 2012 3:46 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Magyar, Español
[Raha tsy misy fanambarana mifanohitra aminy, ny rohy rehetra ato dia mankany amin'ny teny Espaniôla avokoa.]
Nandritra ny vovonanan'ny Global Voices nokarakaraina tao Kenya volana vitsy lasa izao, dia afaka nandrakitra tafatafa niarahana taminà bilaogera vitsivitsy tonga tany aho. Isan'izy ireny, ny tafatafako tamin'i Chris Moya, espaniôla mpamokatra rindrambaiko sady “hacktiviste”, mpiara-miasa amin'ny Global Voices.
Tomponandraikitra aminà tetikasam-pamoronana iray i Chris, mpamokatra rindrambaiko malalaka ary mpiangaly mozika. Mitolona ho amin'ny fahaleovantenan'ny olom-pirenena izy. Izy no niara-namorona ny vavahadin-tserasera spainrevolution.com izay atolony ato anatin'ity lahatsary eto ambany ity.
Volana vitsy lasa izay, ireo fikambanana Cibervoluntarios sy Empodera.org dia namoaka boky elektronika iray mitondra ny lohateny hoe Redvolution: el poder del ciudadano conectado [« Revolisiona anaty tambajotra : ny herin'ireo olom-pirenena mifan-drohy »] (PDF), tetikasa iray nandraisan'i Chris, tamin'ny alàlan'ny fizarany ny fomba fijeriny tety anaty aterineto sy ny lanjan'ny fampahalalam-baovao:
Ao amin'ny aterineto, eo noho eo ny vaovao. Raha vao misy zava-mitranga, tsy mila miandry izay hosoratan'ireo media nentin-drazana, na izay hatontany, sivaniny sy ho avoakany. Izay mitàna ny vaovao no mitana ny fahefana. Nefa an-dàlam-piovàna tànana ny vaovao izao. Manomboka izao dia isika no tompon'ny vaovao, ary ireo izay nihevitra foana ny hifehy sy hanara-maso azy no nanolotra azy ho antsika teo ambony lovia madio. Nomeny antsika aloha ny fitaovana tamin'ny fieritreretany fa ho afaka hanohy ny fifehezana ny fampiasàn'ny olom-pirenena azy ireny ry zareo. Avy eo, teraka ny fiaraha-mientana voalohan'ireo “netocratiques”, ny rafitra marindrano, tsy misy fibaikoana. Vondrona natsangan'ireo olona izay tsy mifankahalala akory, tsy mifampifehy anaty sokajy efa voafaritra mialoha, manana hevitra vaovao momba ny fiarahamonina. Vantany vao voadingana io tsipika io, tsy misy intsony fiverenan-dia azo sainina.
Hererin'i Chris fa amin'ny alàlan'ny aterineto sy ny fanaovana izay hampahaleo tena ny resaka cyber no hahafahan'ny olom-pirenena tsirairay mihetsika sy mahita vokatra manoloana ny tsy rariny izay tsy iza fa ireo tomponandraikitry ny governemanta.
Mipetraka ao amin'ny biraonao, ao an-efitranonao, dia efa fomba maro no ahafahanao mihetsika. Azonao atao ny mifandray amin'ny « sampan-draharaha miahy ny isam-batan'olona », na dia efa fantatrao aza fa tsy misy inona ho azonao. Na koa, azonao atao ny miara-mirohotra ùandray anjara aminà hetsika sosialy fampiroboroboana ny fandraisana fanapahan-kevitra mikasika ireo olan'izao tontolo izao sy ireo fanetsehana samihafa. Azonao atao ny manoratra ao amin'ny bilaoginao, manome ny fomba fijerinao, izay hozarain'olona hafa amin'ny sehatra hafa ary hovakian'olona 7 tapitrisa, ho tonga angamba any ampoto-tsofin'ny sekreteran'ny Filoha izay, ho fatin'ny henatra amin'ny sary ratsy « ara-tsosialy » ahitàn'ny rehetra azy sy ny ho fiantraikan'izany amin'ny resaka fifidianana, hanapa-kevitra ny hamerina handinika ny fomba fanaony. Azonao atao ihany koa ny mizara ny hevitrao eny anaty tambajotra sosialy, ny mahatsapa fa hay olona an'aliny no mitovy fisaina aminao ary tonga hatramin'ny hoe misy olom-pirenena an'arivorivony mivoaka midina an-dalambe sy manao fihetsiketsehana. Vonoinao ny solosainao araka izay ary dia hiteny ianao hoe : androany, tsaroako ho tena olom-pirenena kokoa noho izay lasa izay aho
Tanisain'i Chris amintsika ny sasantsasant amin'ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fitolomana :
“hacktivisme”, fanavaozana ara-tsosialy, tambajotra, tetikasa fanomezana fahaleovantena, fandraisana anjara avy amin'ny olom-pirenena, fangaraharàna ety anaty aterineto, governemanta malalaka, teknolojia sosialy, famatsiam-bola amin'ny firotsahana mivantana, fahalalahana miteny ety anaty aterineto… Ireny foto-kevitra rehetra ireny, ary ny hafa maro, no fo mitepo ho an'ireo vahaolana maro izay tsy maintsy ataon'ny mpitolona ny hahazoana tombontsoa avy aminy. Ireny hetsika ireny, ireny endrika fisainana, ny fananganana aterineto, ny fizaràna ny vaovao sy ny kolontsaina, no fitsipika fototry ny fisainan'ny olom-pirenen'ny taonjato faha-21.
Miresaka ihany koa izy momba ireo fitaovana niomerika, ao anatin'ity lahatsary manaraka ity :
Faranan'i Chris amin'ny filazàna hoe:
Ao anaty tontolo iray izay mitohy hatrany mihodina manodidina ny vola, izay manome vahana ny isam-batan'lona, ny famarotana hevitra, ny famarotana izay rehetra azo amidy mihitsy raha ny marina, no misy olona mipongatra, tsy hoe vitsivitsy fa an'arivony, izay manolotra tolo-kevitra vaovao, mizara, mandrindra, mamorona ary misaina, miaraka amin'ny tanjona tokana hotratrarina, dia ny fahasambaran'ny daholobe alohan'ny hasambarana isam-batan'olona. Zava-dehibe io fanovàna fomba fisaina io miohatra amin'ny reaka fanorenana indostria. Rehefa masaka tsara ety anaty aterineto ny hevitra, dia handingana kosa ny sisintany virtoaly ary hipetraka any anaivon'ny fiarahamonina sivily any, amin'ny fiainana andavanandron'ny tsirairay. Azo sainina ny hisian'ny tontolo iray hafa.
Anatin'ireo tetikasa hafa nadraisan'i Chris anjara, azontsika tanisaina ny : Apps4Good (hetsiky ny Dale Zak ao Kanada), fiaraha-miasa tamin'ilay mpanao taokanto, Jordi Abello tanaty asa nampifandraisana ny mpiasanà banky sy ny rindrambaiko finday na niaraka tamin'ilay mpanao gazety Lali Sandiumenge tao anatin'ny tetikasa tohana MésCafèambllet (Fanampim-baovao misimisy kokoa, amin'ny teny Frantsay, momba ity lohahevitra ity eto).
Lahatsoratra mifandraika aminy :
Afef Abrougui, vehivavy bilaogera toniziana [fr|
Tafatafa niarahana tamin'i Rebecca MacKinnon mikasika ny bokiny “Consent of the Networked” [fr]
Sary an'i Rezwan navoaka tao amin'ny Flickr ho an'ny Global Voices Online, novokarina teo ambanin'ny lisansa CC BY-ND 2.0.
3 ora izayAmerika Latina